3d Games - hilalao amin'ny aterineto maimaim-poana - hilalao afaka amin'ny Lalao - Lalao
3d lalao an-tserasera
Free 3D lalao an-tserasera misy intsony ny zava-baovao, fa mbola afaka gaga. Boky sy sary miloko, ny fahaiza-mandinika ny zava-misy avy amin'ny lafiny samihafa, be ny lohahevitra isan-karazany ho azy ireo malaza. Play tena mahafinaritra azy, satria efa nangonin'ny eto ho ny hazakazaka, ady, RPG, mpitifitra faritra sy ny maro hafa. Ny boky tabilao dia tsy tsara ho, fa misy ao aminy, ary no soa azon'izay - ny faritany no heverina kokoa ny be, ary raha ny fahavalo dia mamitsaka manodidina an-jorony, dia ho mora kokoa ny mahita, ary ny hazakazaka fotsiny inimitable.
Famonjena ny ala
Tontolo iainana Jurovic Jurassic
Pixel Wars Fanambarana Zombie
Kogama: Tany ifotony
Misaron-tava tafika: Zombie Survival
Kogama: Miorena eo amin'ny fandresena
Ady Crazy Pixel
Farany 3d lalao an-tserasera
Fanamby amin'ny Super Car
Lalao Online Rehetra 3d Games - hilalao amin'ny aterineto maimaim-poana
Teknolojia fandrosoana dia tsy azo sakanana. Izy io no mahatonga ary mametraka exponentially, bebe kokoa ny antsika dia gaga. Vao haingana, dia tsy nanan-hevitra momba ny mety hisian'ny fiainana ao amin'ny virtoaly toerana, ary tsy menatra Pixel sary, satria raha tsy izany isika zareo ka tsy fantatro. Rehefa nanomboka hita ny voalohany 3D lalao, dia tena boom. Tsy lavorary, nampiasa teknolojia vaovao nineties zava-bita dia mavitrika miezaka hisarika ny ny vokatra araka izay azo atao mpampiasa. Tsikelikely, ny sary tsara no kokoa, nanjavona ny tsy fahombiazana sy ny fandaharam-potoana glitches ao.
Inona no lalao an-tserasera 3D
3D sary - karazana boky ity misy zavatra efa misy na an'eritreritra. Miaraka izany, izy ireo, raha toa izao ary hitsangana hanao tanana, toy ny foto-kevitra no ho eo aminy. Amin'izao fotoana izao isika dia afaka hanatitra anao 3D lalao maimaim-poana amin'ny aterineto. Anisan'ny kilalao atao amin'ny izany teknôlôjia izany, dia hahita lohahevitra isan-karazany sy ny tetika ahodiny. Indray mandeha, rehefa nitsambikina tao anaty mamirapiratra io, ny saritaka izao tontolo izao, dia tsy te-handao azy mandrakizay. Izany no toerana toa izany ny zava-drehetra mahazatra sy mahafinaritra tamin'izany andro izany. Mampitombo ny tsipiriany ny toerana, dia afaka mahita fa nihozongozona ny ravina kely, ahitra, mamirapiratra toy ny ando, volombava wiggles vitsika no hita taratra eo amin'ny mpianatra ny toetra amam-panahy izao tontolo izao.
Genre fampiasana ny teknolojia ho an'ny 3D lalao an-tserasera
Advanced 3D lalao an-tserasera mamela anao mahita izao rehetra izao amin'ny an-tsipiriany ny saritaka sy avy amin'ny fomba fijery samihafa. Fa ampy mba hampody ny fakan-tsary sy ny foto-kevitra eo anoloantsika amin'ny lafiny hafa. Ho azy, ny 3D teknolojia mampanan-karena fanampiny vokatra dia manome azy ireo fahafahana, sy marina mahatonga mareva-doko, tsara tarehy.
ny boky manampy eo amin'ny fikatsahana fahafaham-po tabilao, izay tsy maintsy hahita zavatra miafina ao ambadiky ny zavatra hafa.
Ao amin'ny miaramila kilalao, noho izany, dia mora kokoa ny hiatrehana ny fahavalo.
Jereo ny toerana 3D lalao an-tserasera. Interstellar lasa tanteraka toerana ary mitodika voajanahary. Ankehitriny, nandalo azy ao an-fomba no tsy hanao ny asa fitoriana, mahazo mpilalao teboka, mampitombo ny toe-karena, ary afaka mankafy fotsiny ny tontolo manodidina azy, niseho eo anatrehanao amin'ny feno voninahitra.
Kilalao izay mahazatra antsika ny fitaovana am-boalohany ho an'ny lalao Nampahery, dia samy efa tsy vao nifindra ao amin'ny solosaina manokana, fa koa Hita ao amin'ny horonam kisary. Sonic ny sokina sy ny Super Mario manohy ny traikefa nahafinaritra, ny ady amin'ny heloka bevava, mandray anjara amin'ny fanatanjahan-tena, tafiditra an-tontolon'ny ny fitaoman 'ny hafa, sy ny maro hafa, ary miaraka amin'izay koa, manome antsika ny fahafahana hilalao lalao an-tserasera 3d.
toy izany mahazatra sy ny mahazatra-matanjaka feno hazakazaka nahazo ny vatana, ary ankehitriny milalao ireo no tonga be dia be ny voly.
Fanatanjahantena lasa mainka nahavariana. Football saha, tenisy fitsarana, ady totohondry peratra ho efa tena, ary hanatitra ny handray anjara amin'ny fifaninanana ny atleta izay tsy mijery tsy zava-misy. Azo atao ve ny sary an-tsaina tsy misy 3D billiards? Amin'izao fotoana izao, dia tsy.
Fishing mahazo manokana hanendry na 3D lalao. Tena mpankafy mihantona avy eo amin'ny renirano manantena mba hisambotra ny tsy manam-paharoa trondro mba fialam-boly mandany fotoana sy mankafy ny solosaina Monitor, raha namelatra teo anoloan'izy ireo mareva-doko ny endriky ny tora-pasika hafakely.
Hatramin'izao, ny tsy fisian'ny toy izany dia tsy kilalao, ary dia afaka hanome fahafaham-po ny nitaky ezaka lehibe indrindra tiany. Adult Gamers mandeha nihaza, milalao fanatanjahan-tena, mandray anjara amin'ny ady malaza ny hoavy, ny ankehitriny sy ny taloha. Ny ankizy dia afaka manangona zavatra, mandalo mazes, fametrahana ny mpandray anjara ao amin'ny lalao ara-toekarena simulator, hikarakara ny biby ary ny maro hafa.
Ny mahavariana teknolojia ny boky sary
ny mpahay siansa ao amin'ny Anjerimanontolon'i Tokyo namorona ny teknika izay mamela ny mpijery hifaneraserana amin'ny ny sary ny mikasika izany. System dia tsy mbola nirohotra nizara, fa ianao dia afaka miomana ho taranaka vaovao ny lalao, raha azo atao dia ho fanaraha-maso tsy ny totozy tsy amin'ny alalan'ny sy ny keyboard, ary Miroboka ao 3D tanteraka ny zava-misy.